Shabakadda Wararka ee 'Indian' Tagged 'News' - THE INDIAN FACE
Aynu daacad u ahaano dhammaan Ruuxdeenna Hindida ah, gudaha The Indian Face Waxaan sidoo kale dooneynaa inuu sanadkan dhammaado oo uu dhammaado HADDA ... FUCK 2020! Hadda waxaan ka tagnay sanad kadib waxaanan galeynaa mid cusub oo leh dhammaan rabitaanka adduunka, 2021 oo aan ognahay inay ka buuxsami doonaan caqabado cusub laakiin sidoo kale fursado AAD U BAXDO, maxaa yeelay tacabur ... hal-abuurka runta ah, ayaa nagu sugaya halkaas.
Bixiyeyaasha iyo jumloyaasha jumladaha indhaha iyo alaabada
Waxaan bilownay aaladdeena jumlada oo loogu talagalay dadka wax u iibiya iyo kuwa wax iibsada. Waxaan nahay jumlo iibiyayaal iyo iibiyayaal dhar, optic iyo alaabada jumlada waxaanan u qaybinaa wax soo saarkeena in kabadan 30 wadan. Iibkayada jumladaha ayaa gaaraya 5 qaaradood.
Álvaro Fernández Fiúza: kooxdeena seddexda jeer ku guuleysatay marathon adduunka
Isboortiga barafka ee Isbaanishku waxay rajeynayaan wax kasta oo ka dhaca tartamada adduunka ee Austrian
Ciyaartoyda barafka ee Isbaanishka waxay ku hamiyaan wax walba oo ka socda Horyaalnimada Adduunka ee Austria Maanta, Janaayo 15 iyo 25, Koobka Adduunka ee Barafka ayaa ka dhici doona xarunta Kreischberg (Austria). Inta lagu guda jiro 10-ka maalmood ee tartanka, loox-barafka, nus-biibiile, xaglaha, barbar socda SL, dhacdooyin waaweyn ayaa la qaban doonaa.
Alvaro Fiuza iyo Walter Bouzan ayaa kaalinta labaad ka galay Koobka Adduunka ee Oklahoma
Alvaro Fiuza iyo Walter Bouzan ayaa kaalinta labaad ka galay Koobka Aduunka ee Oklahoma Alvaro Fiuza iyo Walter Bouzan oo kaalinta labaad ka galay Koobka Aduunka 'Oklahoma World Canoeing Championship' ee K2 Marathon. Waxaan halkaan kaaga tageynaa dhammaan taariikhdii uu qoray Alvaro Fiuza.
Alvaro Fiuza ayaa ku guuleysatay markiisii ​​shanaad oo isku xigta Sella
Alvaro Fiuza wuxuu ku guuleystey markiisii ​​shanaad oo isku xigta Sella oo ah xubnaheena The Indian Face TEAM Alvaro Fiuza ayaa ku guuleysatay markiisii ​​shanaad oo isku xigta oo Sella ay wehliyaan saaxiibkiisa Walter Bouzan. Waxay guuleysteen maanta, oo leh 1 saac 6 daqiiqo iyo 43 ilbiriqsi, daabacaaddii 78-aad ee Sella International Descent.